Famerenana ny fandaharam-potoana: Tolotra fanasoavana tranonkala mahasoa ho an'ny non-coders
Raha olona tsy teknika ianao dia afaka miseho amin'ny sakana sasany rehefa misafidy tombom-barotra mahasoa . Marina fa misy fandaharan'asa maro ao amin'ny Internet. Ny sasany amin'izy ireo dia mamoaka ny angona avy amin'ny adiresy imailaka raha toa kosa ny hafa dia mitifitra ny fampahalalam-baovao, ny toerana an-dalamby, ary ny sehatra media sosialy. Ny fandaharam-pampandrosoana manaraka manaraka dia natao manokana ho an'ny mpihaino sy olona izay te hiala amin'ny tenim-pandrindrana tahaka ny C ++ raha hanatanteraka ny andraikiny.
Io no iray amin'ireo serivisy tranonkala tsara indrindra sy mahasoa indrindra ho an'ireo tsy mpaka sary. Ny mahasamihafa an'i Spinn3r dia ny fanakanana ny tranonkalanao manontolo sy ny fampiroboroboana ny angona avy amin'ny bilaogy manokana, ny media sosialy ary ny fehezanteny RSS. Mampiasa API Firehose izy io ary manjary maherin'ny 80 isan-jaton'ny fandinihan-tserasera sy mipetaka amin'ny Internet. Ankoatra izany, Spinn3r dia mitahiry ny fampahalalana voafantina amin'ny endrika JSON ary manana toetra mitovy amin'ny Google. Izy io dia mijery sy manavao ny tahirin-tsakafonao araka ny fepetra takinao ary manao fikarohana momba ny angon-drakana mena, manome anao mora foana ny vaovao tsara sy tsara.
Octoparse dia iray amin'ireny sora-panodinana daty ireny izay mora ampiasaina. Fantatra be indrindra amin'ny interface sy namana miavaka. Octoparse dia mahatonga anao ho mora ny manakona ny angona avy amin'ny tranonkala sarotra ary mampihetsi-po ny mpampiasa azy rehefa manaisotra vaovao sy mikendry ireo tranonkala sy bilaogy samihafa. Octoparse dia ahafahanao mamonjy ny angon-drakitra voatahiry ao amin'ny rahona na maka izany ao amin'ny milina ao an-toerana.
Fminer dia iray amin'ireo fandaharam-pamokarana mahasoa indrindra momba ny angona. Izy io dia mampifanaraka ny mari-pamantarana manerantany, ary mamela anao hijery ny angon-drakitrao rehefa voasarona. Fminer dia mamoaka vaovao avy amin'ny tranonkala tsotra sy sarotra ary tsy mitaky fahaizana manamboatra programa mihitsy. Raha tsy manana fahalalana ara-teknika ianao, dia ny Fminer no programa mety aminao.
Fitaovana mahery vaika Firefox izay azonao ampiasaina sy ampiasaina ho fanampiny Add-ons Firefox. Outwit Hub no iray amin'ireo fitaovana mahomby indrindra sy mahavariana indrindra. Tsy vitan'ny hoe manangona sy manakona angon-drakitra fotsiny izy io fa mikaroka ihany koa ny tranonkala samihafa, ka mahatonga anao ho mora kokoa amin'ny fampiroboroboana ny marikao. Ny fandaharam-potoana ivelan'ny faritra, ity programa ity dia tsy mila fahaiza-manatsara fandaharana ary mora ampiasaina.
6. Web Scraper - Chrome Extension